I-Art Of Image SEO - Amathiphu Alula Nge-Expert Semalt
Izithombe namavidiyo iyimpahla yethrafikhi ephilayo kanye nokwenza ngcono injini yokusesha , kodwa ngeshwa, ngokuvamile bayanakwa. Kuphephile ukusho ukuthi izithombe zishayela ithrafikhi engaphezulu futhi zithuthukise injini yakho yokusesha yesayithi. Kukhona ubukhulu obuningi ekuthuthukiseni isithombe okubandakanya ukubekwa okungcono emiphumeleni ye-Google, ukulungiswa kokuhlangenwe nakho komsebenzisi okungcono, nokwenza ngcono kokuthola amasheya amaningi omphakathi wezenhlalo. Ukuze ulungise isithombe, kufanele ucabange ngesakhiwo se-URL, amathegi achazayo, nombhalo wokubeka. Nazi amathiphu ayisithupha esithombeni se-SEO esilungiswe nguLisa Mitchell, i Semalt iMenenja ye Impumelelo yoMthengi.
1. Thola izithombe ezifanele:
Ukuthola uhlobo olufanele lwezithombe kubalulekile. Izithombe eziphakeme kakhulu zengeza ubukhulu nobukhulu ezihlokweni zakho noma kumakhasi wewebhu. Ngaphandle kwalokho, bakhuthaza abantu ukuthi bahlanganyele okuqukethwe kwakho futhi banikeze nge-backlinks yekhwalithi. Ungathola izithombe ezifanele ku-Flickr, iStockPhoto, Shutterstock ne-Getty Images. I-Flickr cishe isevisi engcono kakhulu futhi esetshenziselwa ukuthola izithombe zamahhala. Lapha ungakwazi ukufinyelela inombolo enkulu yezithombe bese ulanda izithombe eziningi njengoba ufuna. iStockPhoto and Shutterstock ineqoqo elikhulu lemifanekiso yesitoko. Ungabhalisela kulezi zinsizakalo ukuze ufinyelele kulazo zithombe.
2. Sebenzisa igama elingukhiye egameni lakho lefayela:
Njengoba nje usebenzisa i-URL ukuchaza okuthunyelwe noma ikhasi elithile, kufanele usebenzise igama elingukhiye egameni lakho lokufaka igama. Qiniseka ukuthi igama elingukhiye eliyisisekelo lisetshenziswa njengegama lefayela lesithombe sakho. Akufanele kube into efana neStock_0004221245XSmall..I-jpg ngoba amafayela afana nalawa angangezi ulwazi mayelana nokuqukethwe kwakho. Kunalokho, kufanele uyiqambe kabusha ku-image-optimization.jpg.
3. Dala i-alt echazwe ngokucacile:
Ukudala i-alt echaza ngokuchazayo noma amathegi e-altare kubalulekile. Lezi zisiza i-Google, i-Bing, ne-Yahoo sinquma ukuthi zithini izithombe zakho. Ngokungafani nokuqukethwe kwendabuko, izinjini zokusesha azikwazi ukuhlola umbhalo wezithombe zakho uze ungafaki ama-alt alungile.
4. Umbhalo wehange:
Umbhalo we-anchor ungenye yezinto ezibalulekile zesithombe se-SEO. Uma ufuna ukusebenzisa izithombe eziningi esihlokweni esisodwa, qiniseka ukuthi imibhalo ye-anchor ifakwe kahle kubo bonke. Sebenzisa amathekisthi okuchaza okuchaza achaza izithombe zakho. Enye into ebalulekile okufanele uyiqaphele ukuthi kufanele usebenzise igama elingukhiye ekuchazeni izithombe zakho. Asikho isidingo sokusebenzisa amagama ajwayelekile angahambisani nezincazelo zokuqukethwe kwakho. Amagama angukhiye asiza izinjini ukuhlola uhlobo lokuqukethwe kwakho kanye nohlobo lwezithombe ozisebenzisayo.
5. Izithombe kufanele zifananise nokuqukethwe kwakho:
Okuqukethwe okuzungezile izithombe zakho kumele kuhambisane ne-URL yesithombe, amathegi we-anchor, nama-alt umbhalo. Futhi, kufanele uvumelanise kokubili okuqukethwe kwakho nezithombe ukubandakanya abantu abaningi nokuningi. Izosiza izinjini zokusesha ziqinisekise ukuthi awuzami ukugaxekile futhi izithombe zifanele futhi zinezinga eliphakeme.
6. Ungenzi izinto:
Kuzohamba kuzo zonke izinhlobo zokusebenza kwe-injini yokusesha, kodwa sizosho ngokucacile: akufanele ubeke amagama angukhiye ukuze ugcwalise isithombe se-alt. Esikhundleni salokho, umbhalo wakho we-alt, amazwibela, negama lefayela kufanele lichaze, liphelele futhi lifushane. Kufanele ukwandise izithombe ngendlela abasebenzisi abaningi nabaningi abazozibandakanya ngayo, bakuthole rankings kangcono injini rankings Source .